Jamacadda Camuud oo si kulul uga hadashay hadalkii Faisal Cali Waraabe (DHAGAYSO). • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Somaliland / Jamacadda Camuud oo si kulul uga hadashay hadalkii Faisal Cali Waraabe (DHAGAYSO).
Jamacadda Camuud oo si kulul uga hadashay hadalkii Faisal Cali Waraabe (DHAGAYSO).
June 9, 2018 - By: Mohamed Dahir
Maamulka Jaamacadda Camuud ee Magaaladda Borame ee Xarunta Gobolka Awdal ayaa jawaab ka bixiyey hadal dhawaan kazoo yeeray Faisal Cali waraabe ee uu bulshada reer Borame ku dhiirigelinayey in ay waxyeleyaan dadka Soomaaliyeed ee degan ama wax ka barta Jamacadaha.
Maamulku waxaa ay xuseen sida bulshadu ay isugu xirantahay dhinacyada ganacsiga & waxbarashadda aysana u baahnayn in lasiiyaasadeeyo,waxaa ay hadalka faisal cali waraabe ku tilmameen mid aan ummada qaban” arinta ladoonayo in qabiil loo rogo,ganacsato badan baa jirta oo reer Somaliland ah oo Puntland ka shaqaysata Dahabshiil baa ka mid ah Tuulo kasta Xafiis buu ku leeyahay,waxaa Jira dad reer Puntland oo xawaalado ku leh Hargaiza,waxaa Jira Hotelo waweyn oo ay halka ka dhisteen sidaasi waa sida aynu rabno,ganacsiga & waxbarashada yaan lakala siyasadayn dadku hakala xoogsadeen”.
Maamulku waxaa ay siyasiyiinta Somaliland usoo jeediyeen in aanay dhibtu halka ay joogto aanay kasii fogayn isla markaana ay ka fogadaan waxyalaha keenaya in siyasad la galiyo Tacliinta “Arinka Jamacadda Camuud waxaan leeyahay.adeer Jamacadu dee Minishibiyo ma ahan,Jamacadu waxay u furantahay cidkasta oo buuxisa shuruudaha ardaynimo xataa gaaladda Somalida iska daaye,waxaan leeyahay halaga waantoobo arintaa lama siyasadayn karo arrimaha Jamacadda”.